Kwakunjani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile ▷ ➡️
Kwakunjani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile. Kuyo yonke imbali, iinkcubeko ezahlukeneyo zizamile ukuphendula ngemvelaphi yehlabathi. Kwelinye icala, inzululwazi izama ukusikhanyisela ngalo mbandela. Nangona kunjalo, elona bali liviweyo kwaye lafundwa kakhulu kulo lonke elaseNtshona amawakawaka eminyaka lelona libalisiweyo eBhayibhileni.
Nangona kuyinyaniso ukuba namhlanje akukholeleki ukukholelwa oko el mundo inokudalwa ngeentsuku ezisi-7, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba ibhayibhile ayingomsebenzi wokoqobo kodwa yincwadi. Ke sinokufumana iinyaniso ezinkulu malunga nokudalwa kwehlabathi.
1 Kwakunjani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile
2 Usuku lokuqala ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile
3 Ngosuku lwesibini
4 Ngosuku lwesithathu
5 Usuku lwesine
6 Usuku lwesihlanu
7 Usuku lwesithandathu
7.1 Kwakunjani ukudalwa komntu ngokwebhayibhile
8 Ngomhla wesixhenxe ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile
NgokweBhayibhile, ukudalwa kwehlabathi kwakunjalo isenzo sikaThixo. Ngelizwi lakho, Thixo wenza zonke izinto zendalo yonke kwaye wanika ubomi kuzo zonke izidalwas. Ekuqaleni kwendalo, umhlaba wawungenabume, kwabakho ubumnyama kuphela, amanzi angalawulekiyo noMoya kaThixo wahamba kuwo. Emva koko, ngeveki, uThixo wenza umhlaba esiwaziyo.
Usuku lokuqala ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile
Ngomhla wokuqala wokudalwa kwehlabathi, uThixo wathi "Makubekho ukukhanya" kwavela ukukhanya. Ukukhanya nobumnyama kwahlukana, kwaye uThixo wabiza ixesha kunye usuku lwe ukukhanya kunye nenxalenye yexesha kwi i-noche mnyama. Le yindlela eyaqala ngayo imini yokuqala.
Ke ehlabathini kwakusenyanyeni, kuselubala; kwakumnyama phezu kwamanzi enzonzobila.UMoya kaThixo wafukama phezu kwamanzi lawo.
Waza ke wathi: “Makubekho ukukhanya. kwaye kwabakho ukukhanya.
Wathi uThixo ukukhanya yimini, wathi ubumnyama bubusuku. Kwahlwa kwasa kusasa ngenye imini.
IGenesis 1: 1-5
UThixo wadala izulu emhlabeni
Ngosuku lwesibini, UThixo wadala isibhakabhaka (iatmosfera) ngasentla komhlaba. Isibhakabhaka sisebenze ukwahlula amanzi kwimeko yolwelo, kumphezulu womhlaba, emanzini akwimo yegesi. Wafika njalo umjikelo wamanzi.
Wathi uThixo, Makubekho isibhakabhaka phakathi kwawo amanzi, sahlule amanzi kuwo amanzi.
Wenza uThixo isibhakabhaka, wawahlula amanzi angaphantsi kwesibhakabhaka kuwo amanzi angaphezu kwesibhakabhaka. Kwaba njalo ke.
Wathi uThixo isibhakabhaka ngamazulu. Kwahlwa kwasa, yaba lusuku lwesibini.
IGenesis 1: 6-8
Ngosuku lwesithathu uThixo wadala umhlaba
Ngosuku lwesithathu, UThixo wadala umhlaba owomileyo. Amanzi awugubungela wonke umhlaba, ngenxa yoko uThixo wabayalela ukuba babuye umva, beshiya inxenye yomhlaba ibhencekile. UThixo wayibiza indawo eyomileyo mhlabeni kunye namanzi iinambuzane. Le yindlela i amazwekazi kunye neziqithi.
Ngemini enye, uThixo wawugubungela umhlaba nge uhlaza. Zonke iintlobo zezityalo zihlumile emhlabeni, zohlobo ngalunye, isityalo ngasinye sinamandla okuvelisa kwakhona.
Wathi uThixo, Amanzi aphantsi kwamazulu makahlanganisane ndaweni-nye, ukuze ome. Kwaba njalo ke.
Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume uhlaza, imifuno evelisa imbewu; umthi weziqhamo ovelisa iziqhamo ngohlobo lwawo, nokuba imbewu yawo ikuwo, emhlabeni. Kwaba njalo ke.
Umhlaba wavelisa ke utyani obuluhlaza, utyani obuvelisa imbewu ngokwemvelo yayo, kunye nomthi ovelisa iziqhamo, embewu ikuyo, ngohlobo lwayo. Wabona uThixo ukuba kulungile.
Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithathu.
IGenesis 1: 9-13
Ngosuku lwesine uThixo wadala iinkwenkwezi
Ngosuku lwesine uThixo wadala izidalwa zasezulwini ukuphawula ukuhamba kwexesha (iintsuku, iinyanga, iminyaka ...). Wazalisa isibhakabhaka (isithuba) nge iinkwenkwezi kwaye ndadala inkwenkwezi enkulu kunomhlaba ( ilangaUkuqaqambisa usuku. UThixo wadala i inyanga, incinci encinci, ukukhanyisa ebusuku.
Wathi uThixo, Makubekho izikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zibe kwahlula imini kubusuku; ibe yimiqondiso yamaxesha, yeentsuku neminyaka;
mazibe zizikhanyiso esibhakabhakeni samazulu, zikhanyise emhlabeni. Kwaba njalo ke.
Wazibeka uThixo esibhakabhakeni samazulu, ukuba zikhanyise ehlabathini,
zilawule imini nobusuku, zahlule ukukhanya ebumnyameni. Wabona uThixo ukuba kulungile.
IGenesis 1: 14-19
Ngomhla wesihlanu uThixo wadala izilwanyana zasemanzini
Ngosuku lwesihlanu, uThixo wadala i izilwanyana zasemanzini. UYALELE kwaye amanzi ayezaliswe ziintlanzi nezinye izilwanyana zasemanzini, ezinkulu nezincinci. UThixo wadala iintaka, ezambeka ukuba aphile emhlabeni kwaye abhabhe esibhakabhakeni. UThixo wazisikelela iintaka nezilwanyana zasemanzini, waza wayalela ukuba zande zizalise ihlabathi.
Wathi uThixo: Amanzi makavelise imiphefumlo ephilileyo, neentaka eziphaphazelayo emhlabeni, esibhakabhakeni sezulu.
Wabasikelela uThixo, esithi, Qhamani, nande, niwazalise amanzi aselwandle; nande iintaka emhlabeni.
IGenesis 1: 20-23
Ngomhla wesithandathu uThixo wadala izilwanyana zasemhlabeni kunye nomntu
Ngosuku lwesithandathu, uThixo wadala izilwanyana zasemhlabeni. Zonke iintlobo zezilwanyana eziphila emhlabeni kwaye ezingabhabhaziyo zadalwa ngaloo mini, nganye inamandla okuvelisa kwakhona.
Wathi uThixo, Umhlaba mawuphume imiphefumlo ephilileyo ngohlobo lwayo: izinto eziphilileyo, iinyoka, nezinto ezizitho zine zomhlaba ngohlobo lwazo. Kwaba njalo ke.
Wenza uThixo izinto eziphilileyo zomhlaba ngohlobo lwazo, neenkomo ngohlobo lwazo, nazo zonke izinambuzane zomhlaba ngohlobo lwazo. Wabona uThixo ukuba kulungile.
IGenesis 1: 24-25
Kwakunjani ukudalwa komntu ngokwebhayibhile
Ngoko ke uThixo wathetha kuye waza wagqiba kwelokuba enze isidalwa esikhethekileyo, ngokomfanekiselo wakhe nangokufana naye, ukuze silawule zonke izilwanyana awayezidalileyo. Ngaloo ndlela bavela indoda nomfazi.
UThixo wayisikelela indoda nomfazi waza wabayalela ukuba baqhame, bazalise kwaye balawule umhlaba. Zonke izilwanyana zomhlaba, zasemanzini kunye nezilwanyana ezibhabhayo zaziphantsi komyalelo wakhe. NoThixo naye wanika izityalo ukuba zibe kukutya kwabantu nazo zonke izilwanyana. Le yindlela uThixo awagqiba ngayo ukudala ihlabathi.
Ke kaloku wathi uThixo: Masenze umntu ngokomfanekiso wethu, ngokufana nathi; kwaye ulawule kwiintlanzi zolwandle, iintaka zezulu, amarhamncwa, umhlaba wonke, nezilwanyana zonke ezinambuzelayo emhlabeni.
Wabasikelela ke uThixo, wathi kubo, Qhamani, nande; Gcwalisa umhlaba, uboyise, ulawule kwiintlanzi zolwandle, iintaka zezulu, nazo zonke izinto eziphaphazelayo emhlabeni.
Wathi uThixo, Yabonani, ndininikile yonke imifuno evelisa imbewu, esemhlabeni wonke, nayo yonke imithi eneziqhamo ezivelisa imbewu; Iya kuba yeyakho yokutya.
Kuzo zonke izinto eziphilileyo zomhlaba, nakwiintaka zonke zezulu, nakwinyakanyaka yonke enyakazelayo emhlabeni, enomphefumlo ophilileyo, yonke imifuno eluhlaza ibe kukudla. Kwaba njalo ke.
Wakubona uThixo konke akwenzileyo, nanko, kulungile kunene. Kwahlwa, kwasa: yangumhla wesithandathu.
IGenesis 1: 26-31
Ngomhla wesixhenxe ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile
Ngomhla wesixhenxe uThixo waphumla kwaye wayisikelela indalo yakhe
Ngosuku lwesixhenxe, UThixo waphumla. Wanelisekile, kuba yonke into awayeyidalile yayilungile. UThixo wawusikelela umhla wesixhenxe waza wawungcwalisa kuba yayingumhla wokuphumla.
Agqitywa ke amazulu nehlabathi, nawo wonke umkhosi wezo zinto.
Wawugqiba ke uThixo ngomhla wesixhenxe umsebenzi wakhe awawenzayo; waphumla ngomhla wesixhenxe kuwo wonke umsebenzi wakhe awawenzayo.
Wawusikelela uThixo umhla wesixhenxe, wawungcwalisa; ngokuba waphumla ngawo kuwo wonke umsebenzi awayewenzile.
IGenesis 2: 1-3
Nokuba kungokoqobo okanye kukuzekelisa, ibali lendalo lisibonisa ukuba umhlaba wadalwa nguThixo. Yayingengombandela wamabona-ndenzile. Ukudalwa kwehlabathi kukwabonisa ukuxabiseka kwethu njengezidalwa ezenziwe ngokomfanekiso kaThixo kunye nendima yethu njengabalawuli nabakhuseli bomhlaba. UThixo uyakholiswa yindalo yakhe kwaye ufuna ukusisikelela ngokuphumla.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku liyakunceda uqonde njani ukudalwa kwehlabathi ngokwebhayibhile. Ukuba ngoku ufuna ukwazi kwakutheni ukuze uThixo aphumle ngomhla wesixhenxe, qhubeka ukhangela Fumanisa kwi-intanethi.